तुल्सीदास महर्जन मंगलबार, असोज २०, २०७७
यसअघिको श्रृंखला पनि पढ्नुहोस्, भगवान् एवं तथागत चेतनाविना कोरोनालाई जित्न सकिन्न
तथागत चेत नै वस्तु तथा घटना–परिघटनालाई वास्तविक रुपमा बुझ्न गहिराइसम्म पुग्ने दृष्टि र मार्ग हो । किनकि, यस चेतले मानवलाई यथार्थ वा सत्य आफ्नो चेतनाबाट स्वतन्त्र र बाहिर रहेको वोध गराएको हुन्छ । यथार्थले कसैको इच्छा, इश्र्या वा आग्रहसँग साइनो गाँस्दैन । यथार्थ भनेको यथार्थ नै हुन्छ, जुन प्रकृतिको शाश्वत नियम मुताविक चलायमान हुन्छ । तथागत चेतले यसलाई अनुभूत गराएको हुन्छ ।
यथार्थ वा वास्तविकता मानव चेतनामा निर्भर रहन्न र त्यसलाई बुझ्नका लागि तटस्थ दृष्टिमा हेर्न तथा अनुभूत गर्न चेतनालाई प्रयोग गर्नुपर्छ । चेतना बिना यथार्थ वा वास्तविकतालाई बुझ्न सकिन्न, तर चेतना आफै भने वस्तु तथा घटना–परिघटनाको यथार्थ भने होइन ।
कोभिडलाई कसरी हेर्ने ?
प्रकृतिमा कुनै पनि वस्तु वा घटना–परिघटनाका बहुआयाम रहेका हुन्छन् । कोभिड पनि त्यसबाट अलग छैन । कुनै पनि रोग लाग्नु, त्यसले मानव शरीरमा असर गर्नु र त्यो अन्य मानिसहरुमा पनि फैलिएर जानु त्यस रोगको भौतिक आयाम भित्रका कुराहरु हुन् । त्यसैले कोभिडको पनि छुट्टै आफ्नै खालको भौतिक यथार्थ वा आयाम रहेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्दछौं ।
यसले घर, सडक तथा समुदायमा मानिस–मानिसबीच विभेदको भावना पैदा गर्ने स्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसले मानव सँस्कृतिमा गम्भीर असर गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
यो रोग केबाट लाग्छ ? कसरी लाग्छ ? मानव शरीरमा यसले कसरी र कस्तो असर गर्छ ? यसको उपचारमा केले काम गर्छ ? यसबाट जोगिन कस्ता उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ ? भन्ने जस्ता सन्दर्भहरु यसका भौतिक आयामहरु हुन् । तर, यसबाहेक यसका अन्य आयामहरु पनि छन् । जस्तो कि, कोभिडका कारण जनस्वास्थ्यको हालत कस्तो भयो ? यसले मानिसहरुको दैनिक व्यवहारमा कस्तो असर गर्यो ? यसले समाजमा व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? अर्थात् समग्रमा कोभिडले सामाजिक व्यवहारहरुमा कस्ता खालका नयाँ नियमहरु स्थापित गर्न खोज्यो ? भन्ने जस्ता कुराहरु कोभिडको सामाजिक आयाम भित्र पर्दछन् ।
यस्तै गरी यसले कुनै राष्ट्रभित्रको राजनीतिमा र त्यसबाहिर राष्ट्र–राष्ट्र बिचमा समेत कस्ता राजनीतिक व्यवहार एवं सम्बन्धहरु जन्मायो भन्ने कुरालाई राजनीतिक आयामको रुपमा लिन सकिन्छ । कोभिडकै कारण एक राष्ट्रभित्र मात्र होइन संसारभरि नै लकडाउनको अवस्था आयो, जसले गर्दा हजारौं लाखौं र करोडौं मानिसहरुले रोजगार गुमाउनु परेको स्थिति छ भने व्यापार व्यवसायहरु चौपट भएका छन् । यसले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको स्थिति सिर्जना गर्ने सम्भावना बढेर गइरहेको छ । यो कोभिडको आर्थिक आयाम भयो । कोभिडको साँस्कृतिक आयाम पनि रहेको छ । कोभिडले अहिले विश्वव्यापी रुपमा आम मानिसहरुमा भयानक त्रासको वातावरण ल्याइदिएको छ ।
यो सरुवा रोग हो । र, विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको संक्रमणबाट जोगिनका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने नारा दिएको छ । यसले घर, सडक तथा समुदायमा मानिस–मानिसबीच विभेदको भावना पैदा गर्ने स्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ । यसले मानव सँस्कृतिमा गम्भीर असर गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
कोभिडसँग गासिँदै आएका थरिथरिका तृष्णा
कोभिडले महामारीको रुप लिएको कारण यो सिधै जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रह्यो । यसकारण कोभिडको विषय कोही व्यक्तिको व्यक्तिगत विषय होइन । यो सरकारले पूर्ण रुपमा सरोकार राख्नुपर्ने विषय हो । नेपालमा कोभिडसँग लड्नका लागि सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको छ । जनस्वास्थ्यलाई हेर्ने सरकारको प्रमुख अङ्ग स्वास्थ्य मन्त्रालय त छँदैछ । कोभिडको परीक्षणका लागि आवश्यक टेष्ट किट्स, पिसिआर परीक्षणको मेशिन तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट खरिद गर्ने प्रक्रियामा यी दुईवटै जिम्मेवार संस्थाहरु विवादित बने । अयोग्य र भ्रष्टाचारको आरोप यी संस्थाहरुलाई लागेको छ ।
अमेरिकी कर्पोरेट पूँजीजीवि वर्गको साथ चाहिन्छ । त्यो साथका लागि उनीहरुको हितमा मजदूरहरुलाई जसरी पनि काममा फर्काई कम्पनीहरुको नाफालाई जोगाउनु छ, ट्रम्पलाई ।
यस्तो किन भयो ? दृश्यहरु के देखिए र आम मानिसहरुले के अनुभूत गरे भने आमजनता नै महामारीका कारण आर्थिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्यामा अत्यन्त गम्भीर रुपले फसेको बेला सरकारी संयन्त्र भित्रका अधिकारीहरु कानुनी वा गैर कानुनी प्रक्रियाभित्र रही केही निजी लाभ पाउन सकिएला कि भनी हिँड्दा रहेछन् । यो एक निक्रिष्ट चरित्र हो । यो चरित्र मान्छेमा हुने (आर्थिक) भोगको तृष्णा हो । यस्तो चरित्रकै कारण कोभिडविरुद्ध सरकारी कदम कमजोर हुन गएको आम धारणा बन्न गएको छ ।
भोगको तृष्णाले मानिसलाई अन्धो बनाउँदछ र कर्तव्यबाट च्यूत गराउँदछ । यसले सत्यतर्फ उन्मुख गराउँदैन । बेसार पानीले नै ठिक गर्छ भनी नेपालका प्रधानमन्त्रीले कोभिडको विषयमा आधारहिन मन्तव्य दिनु अन्धताको परिचय हो । किनभने कसैलाई लागेकै आधारमा विषय सत्य हुँदैन । बेसार पानीले के र कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरो त्यसभित्र रहेका वस्तुको गुणमा भरपर्ने कुरो हो, जुन परीक्षण गरी प्रमाणित नभई कसैले भन्न सक्दैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिडलाई एक सामान्य रुघाखोकीको संज्ञा दिए । उनले कोभिडबारे सत्यतथ्य जानेर भन्दा पनि जनस्वास्थ्यका लागि कोभिडविरुद्ध लड्न भनी राज्य कोषको ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ला भनेर त्यसो भनेका हुन् भनी विश्लेषण गरिन्छ । उनी ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि अमेरिकी मजदुरहरु कारखानामा गई काममा लागोस् भनी चाहन्थे । किनकि, त्यस्तो चाहना अमेरिकी कर्पोरेट पूँजीपतिहरुको हितमा छ । त्यसैले अमेरिकी कर्पोरेट कम्पनीहरुको इच्छा मुताविक उनले ‘कोभिड सामान्य रोग हो’ भनी बोलिदिए ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले हचुवाभरमा बोल्नुका पछाडि उनीभित्रको तृष्णाले काम गरेको छ । वास्तवमा उनी आफूलाई सर्वज्ञ देखाउन चाहन्छन् । किनकि, उनीसँग अहंकारको तृष्णा छ । त्यो तृष्णा पुष्टीका लागि नै प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाणित तथ्य बिना नै त्यतिकै ‘बेसार पानीले कोभिड ठिक हुन्छ’ भनी बोलिदिए । उता अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘कोभिड सामान्य रोग हो’ भनी झूट बोल्नुमा पनि उनीभित्रको तृष्णाले काम गरेको छ । उनी आसन्न चुनावमा विजयी भई पुनः राष्ट्रपति पदमा बहाल हुन चाहन्छन् । यसका लागि उनलाई अमेरिकी कर्पोरेट पूँजीजीवि वर्गको साथ चाहिन्छ । त्यो साथका लागि उनीहरुको हितमा मजदूरहरुलाई जसरी पनि काममा फर्काई कम्पनीहरुको नाफालाई जोगाउनु छ, ट्रम्पलाई । पुनः राष्ट्रपतिमा विजयीको चाहना भनेको ट्रम्पको सत्ताभोगको तृष्णा हो । त्यही तृष्णाकै कारणले आफूले ‘सामान्य रोग हो’ भनी गलत प्रचार गरेको रोगबाट अहिले उनी आफै संक्रमित भई समस्यामा परेका छन् ।
तथ्यहरुले के देखाउँछन् भने सरकारका अधिकारीहरु कोभिडको भयलाई नै प्रयोग गरेर भौतिक भोग, अर्थ भोग, शक्ति भोग र सत्ता भोगको तृष्णा पूरा गर्ने भनी लागिरहेका छन्
नोवेल कोरोनाभाइरस मानव निर्मित हो कि प्राकृतिक भन्ने सवाल अहिले नै टुङ्गो लागिसकेको छैन । अरु जीवहरुको सवालमा मानव निर्मित हो कि प्राकृतिक भन्ने सवाल आउँदैन । भाइरसमा मात्रै यस्तो प्रश्न उठ्दछ । यस्तो हुनुको कारण के हो भने यो पूर्ण जीव होइन । यसको स्थान जीव र निर्जीवबीच पर्दछ । भाइरसभित्र आरएनए वा डिएनए मात्र हुन्छ । यसमा जीवकोषभित्र रहने अन्य अङ्गहरु हुन्नन्, जसले गर्दा भाइरसलाई पूर्ण जीव भन्न मिल्ने भएन । आरएनए वा डिएनएभित्र रहने आनुवंशिक पदार्थको मात्रा र अनुक्रम (sequence) ले भाइरसको चरित्र निर्धारित हुन्छ । त्यही चरित्रको आधारमा भाइरसले पहिचान प्राप्त गरेको हुन्छ ।
तर, भाइरस भित्रको आरएनए वा डिएनएभित्र रहने आनुवंशिक पदार्थको मात्रा र अनुक्रमलाई वैज्ञानिकहरुले रासायनिक प्रयोगशालामा सुधार गर्न सक्छन् । त्यसैले कोभिड–१९ को नोवेल कोरोनाभाइरस कहिँ कसैले त्यसरी नै त बनाएका होइनन् ? भनी कसैले शङ्का गर्न नपाइने होइन । तर, प्रमाण नभेटिँदासम्म कसैलाई दोष भने दिन मिल्दैन ।
किनकि, नोवेल कोरोनाभाइरसको सिर्जना कसैले कृत्रिम रुपमा विकास नगर्दा पनि प्राकृतिक रुपले सिर्जना हुने सम्भावना झन् ज्यादा रहेको छ । यसो हुनुको कारण के हो भने वैज्ञानिकहरुका अनुसार कोरोनाभाइरसभित्र उत्परिवर्तन (mutation) भइरहन्छ र यसले यसको गुण, क्षमता र चरित्रमा परिवर्तन ल्याइरहेको हुन्छ । वास्तवमा अहिलेको कोभिड–१९ को नोवेल कोरोनाभाइरस यसअघि सन् २००३–२००९ सम्ममा पटकपटक गरी पूर्वी एशियामा महामारीको रुप लिएको सार्स (सार्स–कोभ) र सन् २०१२ मा अरब प्रायद्वीपमा देखा परेको मर्स (मर्स–कोभ) कै विकसित रुप हो । वैज्ञानिकहरुका अनुसार कोभिड–१९ (अर्थात् सार्स–कोभ–२) को आनुवंशिक अनुक्रम (genomic sequence) सार्स र मर्सका आनुवंशिक अनुक्रमसँग क्रमश ७९ र ५० प्रतिशत मिल्दछ । (ncbi.nlm.nih.gov)
मर्न त मान्छेहरु रुघाखोकीको कारणले पनि मरिरहेका छन् । विश्वभरिको आँकडा हेर्ने हो भने वर्ष भरिमा लाखौं मानिसहरु सामान्य रुघाखोकीबाट मरिरहेका होलान् । तर, यसलाई कोभिडसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय वहसमा अमेरिका पक्षीयहरु कोभिड–१९ को नोवेल कोरोनाभाइरस चीनले बनाएको भनी प्रचार गरिरहेका छन् । त्यस्तै चिनीया केही मिडिया तथा चीन पक्षीयहरु यो भाइरस अमेरिकाले बनाएर चीनमा लगी छाडिएको भनिरहेका छन् । वैज्ञानिकहरु चाहिँ यस्ता कुरामा वहस नगरी नोवेल कोरोनाभाइरसलाई साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गर्न तल्लिन देखिन्छन् । त्यसैले नोवेल कोरोनाभाइरस मानव निर्मित कृत्रिम हो भन्नेहरु राजनीतिबाट बढी प्रभावितहरु हुन् भन्न सकिन्छ । तथ्य जब राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भई विश्लेषण हुन थाल्छ, तब त्यो यथार्थबाट टाढा हुन पुग्दछ । यस्तो विश्लेषण तृष्णाजनित भावबाट निर्मित हुन्छ ।
फरक धारको तृष्णा
मुलुक भित्रका वहसहरुलाई नियाल्दा आमधारबाट अलग्ग पहिचान राख्न चाहने केही बिचारहरु बेवास्ता गर्न नमिल्ने खालका छन् । कोही बौद्धिक व्यक्तित्वहरु के भन्दैछन् भने ‘कोभिड केही होइन, यो विश्व पूँजीवादको पतनलाई जोगाउन सिर्जना गरिएको मानव निर्मित आतंक मात्र हो । यस आतंकमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई प्रयोग गरिएको छ’ । उनीहरु भन्दैछन्, ‘यो विश्व मेडिकल माफियाहरुको डिजाइनमा चालिएको मानवताविरोधी आपराधिक काम हो’ । त्यस्तै गरी उनीहरु भन्छन्, ‘कोभिड कुनै घातक रोग नै होइन, यसलाई हाउगुजी बनाएको मात्र हो । मुखमा मास्क लगाउनुमा कुनै तुक छैन’ । यस्तै यस्तै थुप्रै प्रस्थापनाहरु अगाडि सारेर आम मानिसहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारविरुद्ध उत्रिन आह्वान गरिरहेका छन् ।
तथ्यहरुले के देखाउँछन् भने सरकारका अधिकारीहरु कोभिडको भयलाई नै प्रयोग गरेर भौतिक भोग, अर्थ भोग, शक्ति भोग र सत्ता भोगको तृष्णा पूरा गर्ने भनी लागिरहेका छन्, जुन केही मात्रामा माथि उल्लेख भइसके । यो दृश्यमै देखिएका परिघटनाहरु भएकाले यस मामिलामा आएका भनाइहरु तथ्यपरक नै देखिन्छन् । तर, तथ्यहरुले ‘कोभिड केही होइन’ भन्ने प्रस्थापनालाई पुष्टि गर्दैनन् । कोभिड सामान्य रुघाखोकी जस्तै हो भन्ने प्रस्थापनालाई यथार्थताले पुष्टि गरेको छैन ।
कोभिडलाई पछिल्लो समयमा सार्स–कोभ–२ (SARS–CoV–2, Sever Acute Respiratory Syndrome– Coronavirus 2) भनी नामाकरण गरिएको छ । यसको अर्थ हो श्वासप्रश्वास प्रणालीमा गम्भीर खरावी ल्याउने रोग, जुन दोश्रो प्रकारको कोरोनाभाइरसका कारण सिर्जित हुन्छ । मान्छे त रुघाखोकीले पनि मर्छ भन्ने कुरा सही हो । तर, कोभिडले ल्याउने श्वासप्रश्वासको समस्या र रुघाखोकीको कारण उत्पन्न हुने श्वासप्रश्वासको समस्या आकाश जमिनको फरक भएको कुरा डाक्टरहरु मात्र होइनन् स्वयं कोभिडबाट गम्भीर बिरामी भई पछि निको भएकाहरुले बताइरहेका छन् ।
चिनियाँहरुले नै यो महामारी ल्याएका हुन् भनेर पनि दोषारोपण गरियो । तर, तर्ककै कुरा गर्ने हो भने आफ्नै हालत धोती न टोपी हुने गरी चीनले त्यस्तो गलत हर्कत गर्यो भनेर भन्ने आधार केही भेटिन्न ।
मर्न त मान्छेहरु रुघाखोकीको कारणले पनि मरिरहेका छन् । विश्वभरिको आँकडा हेर्ने हो भने वर्ष भरिमा लाखौं मानिसहरु सामान्य रुघाखोकीबाट मरिरहेका होलान् । तर, यसलाई कोभिडसँग तुलना गर्न मिल्दैन । किनकि, कोभिडका कारण मर्नेहरु सामान्य आँकडामा छैनन् । एउटै अस्पताल तथा ठाउँमा सयौं एकै दिनमा मरिरहेका छन् विश्वका कैयौं मुलुकहरुमा । एकैचोटि सयौं लाशहरु ट्रकमा लोड गरेर लगी सामूहिक चिहान बनाई गाडिरहेका दृश्यहरु मिडियाहरुमा आएका छन् । चिकित्साकर्मीहरु स्वयं पनि कोभिडको उपचार गर्दागर्दै एउटै अस्पतालमा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा मरेका छन् । अस्पतालहरु भयानक मृत्यु केन्द्रहरु बनेका घटनाका विवरणहरु मिडियामा आएका छन् । त्यसैले कोभिड सामान्य रुघाखोकी जस्तै हो भन्ने बुझाइ तथ्यपरक देखिन्न ।
रोगका कारक कुनै सूक्ष्म जीवाणु वा विषाणुले जीवको शरीर भित्रका तन्तुहरुमा गर्ने आक्रमण, तिनीहरुको सङ्ख्या वृद्धि, तन्तुहरुमाथि संक्रामक वस्तुको प्रतिक्रिया र तिनीहरुले उत्पादन गर्ने विष नै संक्रमण हो (चिकित्सा शब्दकोषहरुमा संक्रमणबारे दिइएको परिभाषा) । त्यसैले मानव शरीरमा कुनै तरिकाबाट नोवेल कोरोनाभाइरसको प्रवेश नै कोभिडको संक्रमण हो । संक्रमण सबै व्यक्तिमा एउटै स्तरमा फैलिँदैन, त्यो व्यक्तिको रोग प्रतिरोध क्षमतामा निर्भर रहन्छ । यस्तो कुरा सबै संक्रामक रोगको हकमा लागु हुन्छ । मानव शरीरमा भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउने अहिलेसम्म विज्ञानले आविष्कार गरेको प्रविधि पिसिआर प्रविधि नै हो । योभन्दा उन्नत अर्को प्रविधि आएको छैन । यस प्रविधिमा कुनै त्रुटि छैन र कहिल्यै आउँदैन भन्नु सत्य हुन्न । किनकि, हरेक कुराको सीमा हुन्छ । पिसिआर प्रविधिको पनि सीमा अवश्यै हुन्छ । तर, यसको अर्थ यस प्रविधिले देखाएको संक्रमणको चित्र भूmठो हुन्छ भन्नु वास्तविकता हुन सक्दैन ।
चिकित्सा माफियाहरुले नै नाफाका लागि कोभिडको महामारी सिर्जना गरेका हुन् भन्ने कुरा पनि तथ्यपरक होइन । किनकि, यो महामारी चीनको वुहान सहरबाट फैलियो । यसले गर्दा चिनियाँहरुले नै यो महामारी ल्याएका हुन् भनेर पनि दोषारोपण गरियो । तर, तर्ककै कुरा गर्ने हो भने आफ्नै हालत धोती न टोपी हुने गरी चीनले त्यस्तो गलत हर्कत गर्यो भनेर भन्ने आधार केही भेटिन्न । अर्को, यस्ता आरोपहरु कुनै तथ्य प्रमाणविना आग्रहमा आधारित भई सिर्जना गरिएका कुराहरु नै हुने सम्भावना ज्यादा छ । जहाँसम्म कोभिड महामारीमा भूमण्डलीय चिकित्सा माफियाहरुको हात रहेको भन्ने जुन कुरो छ, तर्क सङ्गत बिचार गर्दा त्यस्तो देखिन्न । किनकि, त्यस्तो हुनका लागि यो रोगको जन्म भएको मुलुक स्वयं त्यस्तो कार्यका लागि भूमण्डलीय चिकित्सा माफियाहरुसँग एकाकार भएको देखिनु पर्ने हुन्छ, जुन सत्य देखिन्न । यस्तो हुन सक्ने सम्भावनाका कुनै आधारहरु पनि छैनन् ।
सत्तासिनहरुको फाइदा एवं विश्व पूँजीवादले आफ्नो फाइदाका लागि नै सिर्जना गरेको हो भनी किन भनिरहेछन् त ? यसो भन्नुमा पनि कुनै तृष्णाले काम गरिरहेको हुन सक्छ ।
तर, एउटा कुरो साँचो के हो भने यो कोभिडको महामारीमा नाफाको व्यापार गर्न भने भूमण्डलीय चिकित्सा माफियाहरु पक्कै लागी परेका हुन सक्छन् । किनकि, यसको औषधी, उपचारका उपकरण, खोप आदिमा आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न सक्दा नै उनीहरुको नाफा बन्ने हुन्छ । तर, कुनै पनि घटना–परिघटनालाई विकाउ माल (commodity) बनाउने प्रयत्न गर्नु त व्यापारी वर्गको चरित्र नै भयो नि । यो कुनै नौलो कुरो त भएन नि । उनीहरुले नाफा कमाउलान् भनेर कसैले पनि उपचारका सामग्री नलिने कुरा पनि आएन । अहिले विद्यमान पुँजीवादी विश्व संरचनाबाट कोही पनि तत्काल फुत्किन त सकिन्न नि । त्यसैले नाफाको होडबाजीमा कोभिड उपचार सामग्रीहरु उत्पादन र बिक्री गर्न वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु लागे भन्ने कुराको आधारमा यो महामारी नै उनीहरुले ल्याएका हुन् भन्नु तथ्यपरक हुन्न । तर, उनीहरुको शोषणमा नपर्न अन्यहरुले कस्ता नीति तथा कामहरु सिर्जना गर्नु पर्छ भन्ने कुरा भने सोच्नु जरुरी छ ।
तथ्यपरक नदेखिँदा पनि कोही विद्वानहरु एकोहोरो रुपले कोभिड केही होइन, मास्क लगाउनु पनि पर्दैन, भौतिक दूरी पनि चाहिँदैन र यी कुराहरु सबै सत्तासिनहरुको फाइदा एवं विश्व पूँजीवादले आफ्नो फाइदाका लागि नै सिर्जना गरेको हो भनी किन भनिरहेछन् त ? यसो भन्नुमा पनि कुनै तृष्णाले काम गरिरहेको हुन सक्छ । त्यो के हो भने आमधारबाट अलग्ग भई नयाँ र विपरित प्रस्थापनाहरु ल्याउँदा नै आमबजारमा स्थान बनाउन सक्ने हुन्छ । यस्तो अभ्यास राजनीतिमा बढी गरिएको पाइन्छ । आफ्नो स्थान बनाउने तृष्णाले नै सही र तथ्यपरक दिशामा नभई आग्रह र पूर्वाग्रहको मार्गमा मानिसहरु जाने गर्दछन् ।
समग्रमा तृष्णाले तथ्य र सहीको अनुशीलन गर्दैन । नोवेल कोरोनाभाइरसले ल्याएको कोभिड महामारीका विविध आयामहरुलाई चिन्न र समस्याहरुको समाधानका उपायहरु खोज्न तृष्णायुक्त चिन्तन, व्यवहार एवं गतिविधिले काम गर्दैन । त्यसैले तृष्णा मानस कोभिड विरुद्धको लडाईंमा वाधक हुन्छ । यसको विकल्पमा हरेकसँग तथागत चेत हुनु जरुरी छ ।
#विज्ञान–दर्शन #विज्ञान #दर्शन #तुल्सीदास–महर्जन
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २०, २०७७ १९:२०